Ukuthengiswa Kwezinkampani ZakwaShell zomphakathi - Sekuvele Ukulungele Ukusetshenziswa Umphakathi
Indlela esheshayo futhi elula kunazo zonke thatha inkampani yakho emphakathini ukuthenga a inkampani egobela umphakathi. Inkampani eyigobolondo yomphakathi iyinhlangano esele ifakiwe ebhalisiwe ne-SEC ukuthengisa amasheya ayo emphakathini. Sinezinhlu ezinkulu kakhulu zezinkampani zamashelufu ezithengiswayo. Ungaba nenkampani yakho egobolondo yomphakathi noma inkampani endala kunamahora we-24.
Ngemuva kokuthenga enye yezinkampani zethu zomphakathi, kudalulwa imibhalo futhi ifayilishwe. Lapho uhlanganisa inkampani yangasese nenkampani yomphakathi, ugcina igama lebhizinisi elisindayo. Amadokhumenti wakho wokuhlanganisa amafomu asemthethweni ahlanganisa izinkampani zakho ezimbili, kukushiya unebhizinisi elisemthethweni elungele ukuthengisa ngamasheya alo emphakathini. Okuqukethwe lapha kwenzelwa izinjongo zolwazi nezemfundo kuphela. Ezinye izinkampani ezifakwe kuhlu ezingezansi kungenzeka (zinge) ukuthengiswa esidlangalaleni. Leli khasi akumele libhekwe njengokunikeza ukuthenga noma ukuthengisa izibambiso. Ukuthengiselana kuthathwa kuphela kufakwa kubameli abanamalayisense nabathengi, njengoba kufunwa ngumthetho, hhayi ngqo ngenkampani yethu. Funa izeluleko ezinelayisense yezomthetho neyentela.